Naya Post Nepal | बिचरा १० कक्षा पढ्दै गरेकी कविताले बाबासँग यस्तो भएकी रहिछन ! उनले भनेको यस्तो शब्द जसले सबैलाई रु’वाउने छ
बिचरा १० कक्षा पढ्दै गरेकी कविताले बाबासँग यस्तो भएकी रहिछन ! उनले भनेको यस्तो शब्द जसले सबैलाई रु’वाउने छ
बाबा मलाई डाक्टर पढाउन सक्नुहुन्छ ? नत्र विदेश त पठाउन सक्नुहुन्छ नि ! धेरै पढेर वा विदेश गएर म तपाईंहरूलाई सुख दिन चाहन्छु ।१० कक्षा पढ्दै गरेकी छोरी कविताले भनेका कुरा स’म्झिँदै भ’क्कानि’न्छन् ४६ वर्षे कृष्ण सुनुवार ।
उनले जवाफ दिएका थिए- जग्गा बेचेर भए पनि तिमीलाई डा ‘क्टर पढाउँला ।’ पढाइमा मिहनेती र अ’ब्बल छात्रा कविता ए सईईको तयारीमा थिइन् । कोसी जनता मावि रामपुरमा बिहान ट्युसन पढाइ भइरहेको छ । बिहान ६ बजेदेखि नै ट्युसन सुरु हुने भएकाले कविता बिहान ५ बजे नै घरबाट हिँड्थिन् ।
हिजोचाहिँ उनी साढे ४ तिरै ट्युसन जाने तर’खरमा थिइन् । मि ल्ने साथी सरिता पहिल्यै फोन गरेर कवितालाई लिन आएकी थिइन् । बि’रामी नातिनीको उपचार गराउन कृष्ण बिहान सबेरै धरान गएका थिए । त्यसै बेला उनलाई फोन आयो, १५ वर्षीया उनकी छोरी कविताजस्ती देखिने किशोरीलाई मा’रेर खोलाको किनारमा फा’लिएको छ ।
कविताकी आमा शोभा घ’टनास्थल”मा पुगिसकेकी थिइन् । त र उनलाई प्रहरीले मृ’त छोरीसम्म जा’न दिएको थिएन । किन कि, अ’नुहारभरि ढुंगा र सि’साको बोतलले प्र’हार गरेकाले मृ’त किशोरी कविता नै भएकाे एकिन गर्न कठिन थियाे । नातिनीको उपचार गर्न धरान पुगेका कृष्ण खबर पाएलगत्तै आ’त्तिँदै बेल का-३, डंगटोलस्थित घ’टनास्थलमा पुगे ।
उनलाई पनि पुलिसले श’वसम्म जान दिएन । कृष्णले परैबाट क’पडा देखेर आफ्नी छोरी हुनसक्ने बताएपछि प्रहरीले श’व भ एकाे ठाउँमा जान दियो । उनले थाहा पाए, बिहान ट्युसनका लागि घर छो’डेकी छोरीले सं’सारै छो’डेर गइछिन् । यशोधा खो लाको किनारमा काठका मुढाहरू थोपरिएको ठाउँमा कविताको मृ’त शरीर घो’प्टो पारेर राखिएको थियो ।
कपालले अनुहार छो’पिएको थियो । ‘छेउमा र’गत लागेको ठू लो ढुंगा थियो । त्यो मेरै छोरी थिई, जो बाबा मलाई डाक्टर प ढाउन सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्थी’, कृष्ण भने ।उनका अनुसार छाेरी कसैलाई बि’झाएर भन्ने स्व’भावकी थिइनन् । कविताको कोहीसँग दु’श्म”नी रहेको कुरा पनि थाहा छैन उनलाई ।
तर तिनै छोरीको नि’र्म’म तरिकाले ह त्या गरिएको घ’टनाले उनीहरू शो’कमा डु’बेका छन् । सुनुवार परिवार मात्र होइन, सिङ्गो किराँत चोक शो’क स’न्तप्त बनेको छ । कृष्णले छो रीको ह त्या आ’शंका’मा प’क्राउ परेका १७ वर्षीया सरिता ढ काल खत्री र १९ वर्षका विनोद ढकाल खत्रीवि’रुद्ध कि’टानी जा’हेरी दिएका छन् ।
यी दुवैजनालाई प्रहरीले प’क्राउ गरिसकेको छ । तैपनि कृष्ण र शाेभा न्या’य पाउनेमा ढु’क्का हुनचाहिँ सकेका छैनन् । ‘अरूअ रू ठाउँमा बालिकाहरू मा’रिएको, ब ला त्कृ त भएको समाचार सुन्दा आङ सि’रिङ्ङ हुन्थ्यो । हाम्रा पनि छोरी छन् भनेर ड’र लाग्थ्यो ।
आज आफ्नै गाउँमा, आफ्नै घरमा त्यस्तै विपति आइपर्‍यो’, कृ ष्ण भन्छन्, ‘अरू घटनामा जस्तै हामीले पनि न्याय नपाउने हौँ कि भनेर ड’र लागिरहेकाे छ ।’ यही शंकाले कविताको ह त्या मा संलग्नहरूलाई सा’र्वजनिक गर्न उनीहरू माग गरिरहेका छन् ।
ह त्या रा सार्वजनिक नगरेसम्म श’व नबुझ्ने उनीहरूकाे अडान छ । कविताको श’व पो,’स्टम’र्टमका लागि धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको छ । कृष्णका अ नुसार सरिता र कविता मिल्ने साथी थिए । उनीहरू कोसी जन ता माविमा १० कक्षामा सँगै पढ्थे ।
विद्यालय आउजाउ सँगै गर्थे । अरू बेला सरिता घरमै पनि आउँ थिन् । घटना भएको दिन पनि सरिताकै फोनपछि कविता अरू बेलाभन्दा अलि छिटो घरबाट निस्केकी थिइन् कविता । तर उन लाई विद्यालयसम्म पुग्न दिइएन । घरबाट दुई किलोमिटर पूर्वमा पुगेपछि उनलाई ढुं’गा र सिसाको बो’तलले हा’नेर मा’रियो ।
ह त्या को आशंकामा उनै सरिता र उनका ठूलो बुवाका छोरा वि नोद प”क्राउ परेका छन् । प्रहरी स्रोतका अ’नुसार प्रा’रम्भिक सो’धपुछमा विनोदले अ’पराध स्वी’कारे’का छन् । कविताले फाे न गरेर बाेलाएपछि विनाेद पछिपछि गएका थिए । आफ्नाे घुँ’डा र कु’इनामा चो’ट लागेकाले हिजाे बिहान विनोदले स्थानीय स्वा स्थ्य चौ’कीमा गएर उपचार पनि गराएका थिए ।
विनाेद आफ्ना काका जितबहादुर ढकाल खत्री (सरिताका बुवा) को घरमा बसेर पढ्थे । उनको स्थायी घर भारत सिक्कीमको बि ’युङ हो । कृष्ण र शाेभाकी जेठी छोरीको विवाह भइसकेको छ । हिजो बिहानसम्म उनीहरूका साथमा कविता पनि थिइन् ।
तर उनलाई कसैको अ’पराधले कृष्ण र शोभाबाट छि’नेर लगे को छ, कहिल्यै नफर्किने गरी ।८ वर्षे छोरालाई का’खी च्यापेर कुनामा बसेकी आमा शोभाको आँखा हिजोदेखि ओभाएका छै नन् । उनीहरूको अब एउटै माग छ, छोरीका अ’पराधी’ले कुनै बहानामा उ’न्मुक्ति नपाऊन् ।
ह त्या रा लाई ह’दैसम्मको का’र्बाही होस् । ‘मु’द्दा कमजोर बना एर ८/१० वर्षमै छुट्ने गरी स’जाय सुनाइयो भने फेरि अरू कसै को छोरीको जीवन ख’तरा’मा पर्छ । मलाई जस्तै कसैलाई छोरी को शो’क नपरोस् भन्ने हो भने तिनलाई ज’न्मकै’दको फै’सला सुनाउनुपर्छ’, कृष्णले भने ।शिला पत्र
२०७८ चैत्र २४, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 1508 Views